नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि कन्या कलेज शुरु हुने – sunpani.com
नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि कन्या कलेज शुरु हुने
सुनपानी । १४ असार २०७८, सोमबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको गल्र्स कलेज नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि शुरु हुने भएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणा नेतृत्वको टोलीले सम्बन्धन लगायतका विषयमा आइतबार मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपकुलपति नन्दवहादुर सिंह लगायतका उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गरेर फर्किएको छ । मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपकुलसँग छलफलपनि नेपालगञ्ज फर्किएको टोली सोमबार पनि नगरप्रमुख डा. राणा सहितको छलफलमा छ । कलेज सञ्चालनका लागि असार १० गते भएको ९ औं नगरसभाबाट विनियमावली पारित गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्खवहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो वर्ष बिएससी सिएसआईटी र विएड कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमतिको प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावना तयार पारी सम्बन्धनका लागि केही दिनमै औपचारिक प्रस्ताव विश्व विद्यालयमा पेश गरिने शाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।
नेपालगञ्जमा रहेका मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्राहरुका लागि मुख्य लक्षित गरि कलेज स्थापना गर्न लागिएको हो । कलेज सञ्चालनका लागि निर्माण भइरहेको भवनको सम्पूर्ण कार्य एक महिनाभित्रै सम्पन्न हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । नगर प्रमुख राणाले नेपालगञ्जमा कन्या क्याम्पसको आवश्यकता महसुश गरि शुरुवातदेखि नै कलेज स्थापनाको पहल गरिएको र अहिले त्यो पुरा हुने चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।